Nzira nhatu dziri nyore dzekutanga kuongorora mhando yako online | Martech Zone
Nzira nhatu dziri nyore dzekutanga kuongorora mhando yako online
Chishanu, January 22, 2010 Svondo, October 4, 2015 Michael Reynolds
Kana iwe wanga uchitevedzera maficha enhau zvachose, pamwe wakambonzwa zvakawanda nezve kujoina "hurukuro" uye maitiro aungaita. Iwe unogona kunge wakambonzwawo yambiro: "vanhu vari kutaura nezvekambani yako iwe uripo kana kuti kwete". Izvi ndezvechokwadi chaizvo uye chikonzero chakanakisa chekusvetukira mumasocial media uye kutanga kutora chikamu. Kana iwe uri chikamu chehurukuro, iwe unogona kupindura kumibvunzo, kukuvadza kudzora, uye kupa zviri nani vatengi.
Saka tinofamba sei nekutaurirana kwese? Hezvino zvinhu zvitatu zvaunogona kumisikidza mune maminetsi kuti utange kuongorora nhaurwa nezve yako mhando.
Shandisa Google Alerts Ichi chingangodaro chiri chimwe cheyakareruka asi anonyanya kushanda maturusi anowanikwa ekuongorora mhando. Google Alerts inokutendera iwe kuti ugadzire kiyi yakatarwa yakanangana neyekuzivisa iyo inozokutumira iwe email nguva yega yega yezviri mukati pawebhu izvo zvine iwo akakosha mazwi
Sezvo zita rekambani yangu riri SpinWeb, ndine yambiro yekumisikidza kutarisa izwi rekuti "SpinWeb", zvinoreva kuti ndinowana maemail nguva dzese dzinotaurwa kambani yangu pawebhu.
Gadzira zviyeuchidzo paTweetBeep. TweetBeep ibasa remahara (for kusvika gumi machenjedzo) ayo anoongorora hurukuro paTwitter uye ndokutumira maemail achinyora ese ma tweets ane yako kiyi kiyi. Yambiro yakamisirwa "SpinWeb" inonditumira zuva nezuva (kana paawa, kana ndichida) email ine ma tweets ese achitaura nezvekambani yangu.
Izvi zvinoita kuti zvive nyore kwandiri kusvetukira mune nhaurwa dzinondinakidza.
Shandisa social network ne ZveMagariro. Iyi sevhisi inoteedzera anopfuura makumi masere enetiweki enzvimbo yezita rako rakakosha, kusanganisira Twitter, Facebook, FriendFeed, Youtube, Digg, Google nezvimwewo.
Kana iwe uchitsvaga yakanakisa-yakapusa nzira yekutanga nemaki yekutarisa kuburikidza nesocial media, kushandisa maminetsi mashoma kumisikidza aya matatu maturusi inzvimbo yakanaka yekutanga. Ichagadzirisa mashandiro ako uye nekukuchengetedza iwe kuti uzive kune zviri kutaurwa nezvekambani yako. Iwe zvakare uchaona kuti inosimbisa hukama hwako hwepamhepo nekuti iwe unokwanisa kutora chinhanho kutora nguva chero munhu arikutaura nezvako, uye ndiko kunakidzwa kwevatengi sevhisi.
Tags: brand yekutarisagoogle chenjedzozvichiongororwamagariromagarirokuongorora kwevanhu
Kutenga Maitiro Kuchinja, Makambani Haana
Jan 24, 2010 na2:48 PM
Chinyorwa chakanaka, Michael!
Monitoring ishanduko yeindasitiri yesocial media. Kuteerera rave danho rekutanga, asi harichakwane. Kupfimbana kunodiwa. Zvichienderana nezvido zvako zvekutarisa uye zvekubatana, zvishandiso zviri pamusoro zvinogona kushanda, kana ungangoda kuenda kune inorema-basa mhinduro. Kana uchinge wawana mukana, ndapota tarisa Chishandiso cheCommunity Insights kubva kuBiz360 - nzira huru yekutarisa, kuona kuti ndiani anonyanya kukanganisa masosi enhaurirano, kuti iwe ugone kuita, uye kugovera mabasa ekubatira kune vamwe mukati mekambani yako (socialCRM). ) Inzwa wakasununguka kundibata chero nguva.